Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada: Gabar uu dhalay Madaxweyne Obama oo makhaayad ka shaqaynaysa
August 19 2017 01:00:27
Daawo Sawirada: Gabar uu dhalay Madaxweyne Obama oo makhaayad ka shaqaynaysa
Mid kamid ah labada Gabdhood uu dhalay Madaxweynaha dalka Mareykanka Brack Obama, ayaa lasoo sawiray iyada oo ka shaqeeneysa waqtina ku qaadaneysa Makhaayada lagu iibiyo cuntada Badda sida kaluunka.
Sasha Obama, oo ah 15-sano jir ayaa shaqo kooban xiliga xagaaga ah ka bilowday Makhaayadan caanka ah Martha's Vineyard ee Massachusetts, waxa ayna gabadhan magaceeda oo buuxa u isticmaaleysa Natasha.
Gabadha Madaxweyne Obama ayaa Makhaayada waxaa u raacay lana joogay qaar kamid ah ilaalada gaarka ah ee Aqalka Cad ee loo yaqaan 'Secret Service' si ay amaankeeda u xaqiijiyaan, waxa ayna ku sugnaayeen halka ay gabdhan ka shaqeeneysay.
Sasha Obama, ayaa xirneed fanaanada iyo koofida astaanta u ah shaqaalaha Makhaayada, waxaana la sheegay goobtan ay gabdhan Reer Obama ka shaqeeneyso ay tahay Makhaayad ay xiliga fasaxa u tagaan Madaxweyne Obama iyo Qoyskiisa.
Aqalka Cad ee dalka Mareykanka ayaan ka hadlin sheekada gabadha Madaxweyne Obama oo si weyn ay wax uga qoreen Warbaahinta dalka Mareykanka, gabdhaha Madaxweynaha ayaana horey looga baran in ay shaqeeyaan.
· mamaan on August 05 2016 ·